रोचक जानकारी – Page4– MeroJilla.com
अन्तिम भोजनका रुपमा माछा, चिप्स र केक खाएर १०४ वर्षीय वैज्ञानिकद्वारा स्वेच्छिक मृत्युवरण Friday, May 11th, 2018
स्वीटजरल्याण्ड । विश्वप्रख्यात वैज्ञानिक डा. डेभिड गुडअलले १०४ वर्षको उमेरमा स्वीटजरल्याण्डमा स्वेच्छिक मृत्युवरण गरेका छन् । लण्डनमा जन्मिएर अष्ट्रेलियामा रही बोटनी र पर्यावरण क्षेत्रको वैज्ञानिक बनेर ख्याती कमाएका गुडअलले हाँसीहाँसी मृत्युवरण गरेको जनाइएको छ । इच्छा मृत्युको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था एक्जिट इन्टरनेशनलले गुडअललाई आफ्नो जीवन अन्त्य गर्न सहयोग..
यसरी सुरक्षित राख्नुहोस आफ्नो मोबाइल Wednesday, May 9th, 2018
एजेन्सी । मोबाइल हाम्रो जीवनशैलीको महत्वपुर्ण पाटो बनिसकेको छ । मानिसका हातमा एउटा होइन विभिन्न ब्रान्डका २-३ वटा मोबाइल हुन् थालेका छन् । तर, हजारौ मूल्यका पर्ने यी सामाग्रीमा सामान्य कुरामा ख्याल नगर्दा चाडै बिग्रन सक्छन । केहि त्यस्ता सामान्य कुरा जसको ख्याल गर्ने हो भने हाम्रो मोबाइल धेरै वर्ष टिक्न सक्छ । नयाँ पत्रिकामा छ । १. स्क्रिन सधै सफा गर्नुपर्छ । स्क्रिन सफा..
अव भिसा नभई भारत प्रवेशमा नेपालीलाई रोक
काठमाडौं। भारतले चीन, हङकङ, मकाउ, पाकिस्तान र माल्दिभ्सबाट भारत जाने वा भारत भएर स्वदेश फर्किने नेपालीलाई भिसा अनिवार्य गरेको छ। राजनीतिक तहमा सम्बन्ध सुधार हुँदै गएको ठानिएको बेला भारतले अनपेक्षित व्यवहार गरेको छ। तेस्रो देशबाट नेपाल आउन वा नेपाल हुँदै भारत फर्किन भारतीय नागरिकले नेपालको भिसा लिनु पर्दैन। तर, भारतले नेपाली र भुटानी नागरिकलाई कडाइ गर्दै लगेको छ। चीन र..
एमालेलाई कम्पनीको संज्ञा ,निर्वाचित सरकारबाटै लोकतन्त्र खतरामाः गगन थापा Wednesday, May 2nd, 2018
मुक्तिप्रसाद न्यौपाने पाल्पा । लोकतन्त्रमाथी खतरा निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएको सरकारबाटै सुरु भएको नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले बताएका छन् । उनले यो वा त्यो नाममा लोकतन्त्रलाई साँधुरो बनाएर लोकतन्त्र खतरामा पार्ने काम भैरहेको भन्दै कांग्रेस चनाखो रहेको बताएका हुन् । ‘‘हामी निर्वाचनको मतलाई मान्छौं । आवश्यकता परेको बेला प्रतिरोध गर्छौं । निर्वाचित..
अव सहयात्री फेसवुकले खोज्छ ।
एजेन्सी । लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल ‘फेसबुक’ले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरुको चाहना, गोपनीयता तथा सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा सक्रियता बढाएको छ ।फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुको डाटा चोरी भएको तथ्य प्रकाशमा आएपछि फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरवर्गले फेसबुकलाई अझ सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन विभिन्न कदम उठाएका छन् ।यसअतिरिक्त फेसबुकको लोकप्रियता बढाउन प्रयोगकर्ताहरुको चाहना र सुविधालाई..
यौन शोषणको वास्तविकता बलिउडमा यस्तो छ Tuesday, May 1st, 2018
बीबीसी। भारतका स–साना गाउँ र शहरबाट हजारौं युवा युवती फिल्म स्टार बन्ने सपना सजाएर मुम्बई पुग्छन्। तर धेरैकालागि मुम्बई गएर बलिउडमा आफ्नो भाग्य चम्काउने अनुभव एक नराम्रो सपनामा परिणत हुन्छ। बीबीसी संवाददाता रजिनी वैद्यनाथन र प्रतीक्षा घिल्डियानले यस्ता कयौं अभिनेत्रीसँग कुराकानी गरे, जसले कास्टिङ एजेन्ट्स र निर्देशकद्वारा यौन शोषणको सामना गर्नुपरेको तितो अनुभव..
यौन इच्छा भएपछि महिलाले देखाउने ८ व्यवहार
काठमाडौं । संसारभरि नै एउटा मान्यता छ, महिलालाई बुझ्न कठिन हुन्छ । केटीहरु कम बोलेर धेरै कुरा भन्छन् । पुरुषले महिलाका कुरा केवल बोलीबाट मात्र बुझ्न सक्दैनन् । उनीहरुको व्यवहार पनि बुझ्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । महिलाले यौन चाहना पनि शब्दमै व्यक्त नगर्ने एक अध्यनले देखाएको छ । यहाँ साेही अध्ययनले देखाएअनुरूप महिलाले यौनसम्बन्ध राख्न चाहेको समयमा देखाउने ८ व्यवहारको चर्चा..
यी हुन् विश्वका सात चर्चित यौन बजार Sunday, April 29th, 2018
पछिल्लो समयमा सहबास बजार विश्वमा नै फस्टाउँदै गएको छ । कतिपय देशहरुमा यौन बजार वैध छ भने कतिपय देशहरुमा बर्जित भएपनि गोप्य रुपमा सहबास बजार फस्टाइरहेको छ । ती मध्ये केही सेक्स बजार यस्ता छन् । डोमेनिकन गणतन्त्र विश्व सहबास बजार मध्ये क्यारेबियन राष्ट्र डोमेनिकन रिपब्लिक सबैभन्दा अगाडि मानिन्छ । यहाँ ६० हजार महिला यौनकर्मी रहेको अनुमान छ भने यौन व्यवसायका लागि विभिन्न..
एक महिने कुशन निमार्ण तालिम पर्वत कुश्ममा समपन्न ।Merojilla.com Thursday, April 26th, 2018
रामकृष्ण लामिछाने,पर्वत । एक महिने कुशन निमार्ण तालिम कुश्ममा आज समपन्न भएको छ । सिप विकास तालिम केन्द्र पर्वतको आर्थिक सहयोग र सिसेफ नेपाल कुश्माको आयोजनामा गत फाल्गुन २८ गतेवाट शुरु भएको तालिम बिहिबार समपन्न भएको हो । कुशन निमार्ण तालिममा ३० जना महिलाहरुका सहभागिता थियो । समापनको अवसरमा बोल्दै प्रमुख अथिति व्यवसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र पर्वतका प्रमुख किरण..
चीनकाे टाउकाे दुखाईः सामाजिक सञ्जालमा अश्लील सामग्री Friday, April 20th, 2018
सिन्ह्वा बेइजिङ । चीनमा सामाजिक सञ्जालमा देखिने अश्लील सामग्रीहरू समस्याको रूपमा देखापरेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी रहेको केन्द्रीयस्तरको एक निकायले पछिल्लो समय १२ कामोत्तेजक सामग्री नियन्त्रण गर्न निकै कसरत गर्नुपरेको बताएको छ । चीनको सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालयले लामो समय लगाएर यस बारेमा अनुसन्धान गरेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । अर्को घटना..
फेसबुकबाट सुरु भएको प्रेमको विश्वासमा पर्दा…
काठमाडौं । दुई वर्षसम्मको फेसबुक र फोनमा परेको ‘लभ’ पछि रुकुमकी २७ वर्षीया एक युवती बाँकेको कोहलपुरका ३० वर्षीय तेजेन्द्र तिवारीसँग विवाह गर्न राजी भइन् । काठमाडौं, वैशाख ७ । दुई वर्षसम्मको फेसबुक र फोनमा परेको ‘लभ’ पछि रुकुमकी २७ वर्षीया एक युवती बाँकेको कोहलपुरका ३० वर्षीय तेजेन्द्र तिवारीसँग विवाह गर्न राजी भइन् । फोन र फेसबुकबाटै ‘भाग्ने’ मिति तय भयो । तिवारी फागुन ४..